နှစ်တရာပြည့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် အခြေမတည်နိုင်သေးသော ပါတီ - စနစ်အခြေခံ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး - ISP Myanmar China Desk
နှစ်တရာပြည့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် အခြေမတည်နိုင်သေးသော ပါတီ – စနစ်အခြေခံ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
Published by Khin Khin Kyaw Kyee Updated on July 7, 2021
သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် အာဏာရပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ပါတီတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရာမှာ၊ အပြန်အလှန် လေ့လာသင်ယူရေးအပြင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်တွေကို မျှဝေခြင်း အစီအစဉ်များတွေကိုလည်း ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးရပ်တည်ချက်တွေအပြင် အဲဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေမှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်မှုတွေအပေါ် သုတေသနပြု လေ့လာခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ ခန့်က နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၆၀၀ ကျော်နဲ့ တရားဝင် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ခင်ခင်ကျော်ကြီးသည် ISP-Myanmar ၏ China Desk တာဝန်ခံနှင့် သုတေသနဌာန လက်ထောက်ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။
Categories: Bilateral Relations Diplomacy Politics
Khin Khin Kyaw is the Deputy Director for Research program and also the head of ISP’s China Desk. Khin Khin Master’s Degree in International Studies from the School of Oriental and African Studies, University of London. Prior to joining ISP, she worked as program coordinator for Institute for Political and Civic Engagement, Center administrator for International Law Development Organization (Rule of Law Centre Project) and independent researcher specializing in China-Myanmar relations.
ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၂၀၀၀ကျော် တက်ရောက်မည့် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ၁၉ ကြိမ်မြောက်ပါတီ ညီလာခံကို မြို့တော်ဘေဂျင်းတွင် ယနေ့စတင်လိုက်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ တရုတ်အရေးလေ့လာသူများကလည်း စိတ်ဝင်တစား Read more...
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရက်သတ္တပတ်(တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တပတ်တာသတင်းအနှစ်ချုပ်/ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ပထမပတ်)
တပတ်တာအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းနှင့် ဖြစ်ရပ်များ၊ Read more...
ပြန်လည်အသက်ဝင်လာသော တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံ စီမံကိန်းများနှင့် အခက်ပွေဆဲ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး (တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တပတ်တာသတင်းအနှစ်ချုပ် – ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ပထမပတ်)
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည့် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းဖော်ပြမှုပေါင်း ၆၀ ဝန်းကျင်ကို ISP-Myanmar China Desk က ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း၌ စုစည်းခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား အကြောင်းအရာတခုချင်းစီ Read more...